“(Xukuumadda) Waxay Xaq u leedahay Xulashada Ergada wada-hadalka, iyadoo laga duulayo in Masiirka Shacabka Somaliland yahay…” | Burco Media
Hargeysa (BM)- Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa soo dhaweeyey wada-hadallo kasta oo dhex mara Somaliland iyo Soomaaliya, balse waxa uu soo jeediyey inay wada-hadalladu noqdaan kuwo midho dhala oo natiijo dadka iyo dalka waxtar u leh ay ka soo baxaan.
Murashaxa madaxtinimada Xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen, ayaa qiray in xukuumaddu xaq u leedahay xulashada ergada wada-hadallada uga qayb-galaysa Somaliland, balse ay tahay in axsaabta Qaranka laga qayb-galiyo talooyinka Qaran.
Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo xalay soo saaray war-saxaafadeed ka kooban lix-qodob oo u arrintan kaga hadlay, waxa uu ka hadlay aragtida Xisbigooda ee Ergada ka qayb-galaysa shirka wada-hadallada Somaliland iyo Somaliland.
War-saxaafadeedkaas, ayaa u dhignaa sidan: “1. Marka hore waxaanu soo dhowaynaynaa wada hadallo kasta oo dhex mara Somaliland & Somalia sida ay bulshada caalamkuba u dhiirrigelinayaan; haseyeeshe waxaanu soo jeedinaynaa wadahadalku inuu noqdo mid midho dhala, ee aanu noqon mid sii soco oo soo soco ah.
4. Xisbiga UCID wuxuu aaminsanahay in ergooyinka wada hadalka ka qayb galayaa ay ahaadaan kuwo la mida ama leh miisaankii iyo saamigii ergadii calanka ka soo qaadaysey Ingiriis wakhtigii xoriyadda ee 1960kii, saami ku suntan ergo isleeg tiro ahaan beesha dhexe iyo beelaha darafyada; waxaanan xukuumadda Kulmiye u soo jeedinaynaa in ay ka waantoobaan is indhotirka dhowraana wadajirka, calool fayoobida iyo wax wada lahaanshaha shacabka S/land.
6. Ugu Dambayn, waxaan soo jeedinaynaa in ay madaxda qaranka iyo kuwa xisbiyaduba dhowraan anshaxa masuuliyadda kana waantoobaan hadalada aan habboonayn ee saxaafada la isu marinayo.”
Hadalkan ka soo yeedhay Murashaxa madaxweynaha ee Xisbiga UCID, ayaa u muuqda mid ka soo horjeeda dhaliilo dhawaan ka soo yeedhay Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe oo xukuumadda ku eedeeyey inay maroorsatay ergada wada-hadallada Somaliland iyo Somalia.